Sida Gabadha Aad Jeceshahay Looga Dhigo Mid Si Aada Kuugu Xiisto - Aayaha
Home»XIRIIRKA IYO GUURKA»Sida Gabadha Aad Jeceshahay Looga Dhigo Mid Si Aada Kuugu Xiisto
Inaad ka fogaato gabadha aad jeceshahay ayaa noqon karta mid kamid ah waxyaabaha ugu adag ee aad waligaa sameyn lahayd.
Sidee ayaad uga dhigi kartaa qof kuu xiisa markaad maqantahay oo aad u rabta inay ku aragto ama waqti ay kula qaadato.
Haddii aad sameyso dadaal dhab ah markaas si sahal ah ayaad uga dhigi kartaa mid si daran kuugu xiisto.
Yaree waqtiga aad wada joogtaan
Haddii aad rabtid in gabadha ay kuu xiisto markii aadan la joogin kadib waqti badan lama joogi kartid waqtigaaga firaaqada. Waa inaad waqti la qaadataa si aad u tusto inaad tahay qof cajiiba oo madadaalo iyo xiiso leh laakiin waqti kooban si aysan kuugu arkin qof aanan dan kale lahayn ama aanan ka maarmin.
Ku dadaal inaad aragto ama la kulanto todobaadkii mar ama laba mar adigoo sidoo kale xaqiijinaya inaysan kuu maleyn qof ay heli karto markii ay rabto.
Haddii ay rabto inay kula kulanto ama waqti ay kula qaadato waa inay qorshahaas kugu wargalisaa ugu yaraan maalmo kahor. Ma dooneysid inaad noqoto ama aad u ekaato qof farta loogu yeero.
Markaad la qaadaneyso waqti, hala joogin maalintii oo dhan laakiin ka tag saacado kadib si aad u qabsato howl kale sidaa darteed run ahaantii way jeclaaneysaa waqtigaad wada qaadataan.
Xaddid waqtiga taleefankaaga
Gabadha aad jeceshahay iyo adiga hadaad iskala hadashaan taleefanka, isku day inaad soo gaabiso wada sheekeysigaaga sidaa darteed uma maleyneyso inaadan heysan wax ka wanaagsan oo aad sameyn karto oo aanan ka ahayn inaad iyada lahadasho mar walba.
Waad la hadli kartaa si aad u dajisaan qorsheyaal ama aad u ogaato sida ay tahay xaaladeeda balse waa inaadan yeelin in wadahadalku socdo muddo dheer ilaa aad ka weyso waxaad dhahdo.
Ha uga sheegin taleefan wax kasta oo aad ka fakareyso ama kusoo kordhay noloshaada. Usheeg waxyaabahaas markaad shaqsi ahaan u kulantaan.
Ka dhig waqtiga mid kuu xisaabsan. Haddii aad daqiiqado kula hadasho taleefanka, hubi inaad la timaado ciyaarahaaga soo jiidashada ah, inaad ka qoslisiiso iyo inaad dareensiiso qof qiimo leh inay tahay.
Hala hadlin iyada adigoo mashquul ah; dareensii inaad qiimeyso wadashekeysigiina.
Wax kasta ha dhaafin si aad ula hadasho
Si gabadhu kuugu xiisto, yeysan kuu arkin qof ay u taliso. Haddii ay fariin kuusoo dirto isla markaana mashquul aad tahay, ha dhaafin howlahaaga si aad ugu jawaabto haddi aysan markaas wax dag dag ahi jirin. Taa badalkeeda dhowr saacadadood kadib uga jawaab fariinta. Sidaas oo kale ayaa loo baahanyahay markii ay taleefanka kaasoo wacdo adigoo mashquul ah.
Haddii gabadhu dareento inay ku heli karto mar kasta oo ay ku rabto markaas way adkaan doontaa inay kuu xiisto. Haddii ay aragto inay adagtahay xoogaa waqtigaaga ah inay hesho kadib inbadan ayay qiimeyn doontaa waqtigaaga iyo lahadalkaaga.
Dabcan, haddii ay u muuqato inay murugeysantahay oo ay rabto inaad si dag dag ah kuula hadasho, markaas waa inaad la hadashaa oo aadan noqon qof aanan naxariis lahayn.